तीन महिना बित्न लाग्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को आतंक झन्पछि झन् बढ्दो छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले मंगलबारसम्म १ सय ५६ देशमा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि गरेको छ । डब्लूएचओका अनुसार कोरोनाबाट संसारभर ७ हजार ४ सय २६ जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने १ लाख ७९ हजार १ सय १२ जना संक्रमित छन् । संक्रमण बढेसँगै संसारभर सतर्कता अपनाउन विभिन्न कदम चालिरहेका छन् ।
३१ डिसेम्बर २०१९ मा चीनको हुबे प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण चीनपछि सबैभन्दा बढी युरोपेली मुलुकमा देखिएको छ । यो भाइरसका कारण चीनमा ३ हजार २ सय ३१ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने त्यहाँ ८१ हजार १ सय १६ जना संक्रमित छन् । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना भाइरसको असर कम हुँदै गएको चीन सरकारले जनाएको छ । यतिबेला कोभिड १९ को असर इटली, स्पेन, फ्रान्सलगायतका देशमा बढी देखिएको छ । कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको त्रास बढ्नु स्वाभाविकै हो । हालसम्म नेपालमा १ जनामामात्र कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ । तैपनि आममानिसमा यसको त्रास भने कायमै छ । साथै कोरोनाको शंका लागेर अस्पताल पुग्नेको संख्यामा कमी आएको छैन । नेपालमा बुधबारसम्म ५ सय ११ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झाले बताइन् ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसका कारण ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ सय ३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालसँग भारतको खुला सिमाना भएका कारण आम नेपालमा कोरोना भाइरस समुदायमा प्रवेश गर्छ भन्ने त्रास बढेको देखिन्छ । सरकारले पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि राजधानीका ५ अस्पतालमा १ सय २० र प्रदेशमा १ सय १५ वटा गरी २ सय ३५ आईसीयू बेड थप्न लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए । यसबाहेक एक हजार आइसोलेसन बेड थप गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘तत्कालै नेपालमा ५ सय जनालाई कोरोना देखियो भने हामीसँग उपचार गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने ।
४५ देशका मानिसको मृत्यु
डब्लूएचओका अनुसार मंगलबारसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण १ सय ५६ देशमा देखिए तापनि ४५ देशका नागरिकको ज्यान गएको छ । धेरै मृत्यु चीनमै रहेको छ, जहाँ ३ हजार २ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ ८१ हजार १ सय १६ जना संक्रमित भएको डब्लूएचओले पुष्टि गरेको छ । चीनपछि इटालीमा २ हजार ५ सय ३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २७ हजार ९ सय ८० जनामा संक्रमण देखिएको छ । यस्तै, स्पेनमा ३ सय ९ जनाको ज्यान गएको छ भने ९ हजार १ सय ९१ जनामा कोभिड–१९को संक्रमण देखिएको छ । फ्रान्समा १ सय ४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ हजार ५ सय ७३ जना कोरोना भाइरस संक्रमित छन् ।
यस्तै इरानमा कोभिड–१९ का कारण ८ सय ५३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यहाँ १४ हजार ९ सय ९१ जना संक्रमित छन् । त्यसैगरी जापानमा २८, दक्षिण कोरियामा ८१, जर्मनीमा १३, स्विट्जरल्यान्डमा १४, बेलायतमा ५५, नेदरल्यान्डमा २४, फिलिपिन्समा १२जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै, नर्वे, अष्ट्रिया, स्विडेन, पोल्यान्ड, लेबनानमा ३/३ जनाको ज्यान गएको छ । बेल्जियममा ५ जनाको ज्यान गएको छ । डेनमार्क र ग्रिसमा ४/४ जनाको मृत्यु भएको डब्लूएचओले जनाएको छ । यस्तै, आयरल्यान्ड, बुल्गेरियामा २/२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सान मारिनोमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यसैगरी लक्जम्बर्ग, अल्बानिया, हंगेरी, युक्रेन, थाइल्यान्ड, बहराइन, क्यानाडा, पानामा, डोमिनिकन रिपब्लिक, गुयाना, ग्वाटेमाला, केम्यान आइसल्यान्ड लगायतका देशमा १/१ जनाको मृत्यु भएको छ । इन्डोनेसियामा ५, इजिप्टमा ४, इराकमा ९, संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५८ र अल्जेरियामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । मोरक्को, अर्जेन्टिना, इक्वेडरलगायतका देशमा २/२ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुष्टि गरेको छ ।
‘ए’ रगत समूहलाई बढी ‘ओ’लाई कम संक्रमण
कोभिड–१९ को संक्रमण ‘ए’ रक्त समूह भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित र ‘ओ’ रक्त समूह भएका व्यक्तिहरू कम प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । कोभिड–१९ को उद्गमस्थल वुहान र सेन्जेनमा संक्रमणमा परेका व्यक्तिहरूमा गरिएको अनुसन्धानले यो सार्वजनिक गरेको हो ।
दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित व्यक्तिहरूको रक्त समूह परीक्षण गर्दा उक्त नतिजा देखिएको जनाइएको छ । परीक्षणमा ‘ए’ रक्त समूह भएका व्यक्तिहरू बढी रोगबाट प्रभावित हुनुका साथै उनीहरूमा लक्षण पनि बढी देखिएको थियो । वुहान युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता वाङ जिङहुवानको नेतृत्वमा भएको यो अनुसन्धानको नतिजा अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको र यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान हुने जनाइएको छ ।
२५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सरकारको निर्देशन
सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन नागरिकलाई निर्देशन दिएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको ‘कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’को बुधबार बसेको बैठकले आमनागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक आवत–जावत र हिँडडुल नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै सिनेमाहल साँस्कृतिक केन्द्रहरू, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्सबार तथा क्लब आदिलाई ३० अप्रिल २०२० सम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी, कालोबजारी, मिसावट गर्ने गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामग्रीहरूको पर्याप्त मौज्दात भएकाले आम उपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी सामग्री खरिद र सञ्चय नगर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै सरकारले ५५ वटा देशबाट नेपाल आउन रोकेको छ । सरकारले बिहीबारबाटै चैत मसान्तसम्म विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै बिहिबारबाट सञ्चालन हुने भनिएको एसइइ परीक्षा पनि स्थगित भएको छ ।
-डा. शरदसिंह यादव